Warshadaha Calaamadaha Shiinaha ee jilicsan ee PVC iyo soosaarayaasha | SJJ
Calaamadaha PVC ee jilicsan ayaa sidoo kale dadka qaarkood ugu yeeraan sumadaha cinjirka. Naqshaduhu way kala duwan yihiin oo leh dhammaan noocyada midabada isku dhafan. Adeegsiga kala duwan, taageeriddu waxay noqon kartaa bir, warqad, cajalado dhejis ah, caag adag, Velcro ama xitaa aan lahayn wax taageero ah laakiin inaad ka tagto khadka tolidda dhinaca hore si aad ugu tolto dharka, bacaha, iyo dharka kale. Calaamadaha PVC ee jilicsan ayaa ah sheyga ugu fiican oo matalaya muhiimadda sumadaha.
Calaamadaha PVC ee jilicsan ayaa sidoo kale loo yaqaan sumadaha cinjirkadadka qaarkood. Naqshaduhu way kala duwan yihiin oo leh dhammaan noocyada midabada isku dhafan. Adeegsiga kala duwan, taageeriddu waxay noqon kartaa bir, warqad, cajalado dhejis ah, caag adag, Velcro ama xitaa aan lahayn wax taageero ah laakiin inaad ka tagto khadka tolidda dhinaca hore si aad ugu tolto dharka, bacaha, iyo dharka kale. Calaamadaha PVC ee jilicsan ayaa ah sheyga ugu fiican oo matalaya muhiimadda sumadaha.
Iyada oo midabku ka buuxo naqshadaha 2D ama 3D, summadaha jilicsan ee PVC waxaa lagu samayn karaa nooc kasta oo qaabab ah marka loo eego naqshadeeyayaasha. Faahfaahinta yar -yar waa la daabici karaa marka laga reebo midab la buuxiyey si summadaha looga dhigo kuwo dhab ah.
MOQ ： 500 kumbiyuutar
Hore: Baararka PVC ee jilicsan
Xiga: Jilibyada qaboojiyaha PVC ee jilicsan
Sameeyaha Calaamadda Dharka
Calaamadaha Dharka Caadiga ah
Calaamadaha PVC ee gaarka ah
Calaamadaha PCV -ga Dharka